အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကွင်းသွားဖို့Taxi ခ ၈၀၀၀ ကုန်စရာမလိုတော့ပါဘူး - Logistics Guide
ချစ်သူစုံတွဲတွေ မြို့ပတ်ပြီးရိုချင်လားဖေဖေ၊မေမေတွေက ပိတ်ရက်မှာ သားသားမီးမီးတွေကို မြို့ပတ်ပြီး အဲယားကွန်းကားသစ်ကြီးစီးပြီးစမတ်ကျကျ လိုက်ပို့ချင်လား၊FA တွေကလဲ အိမ်မှာမီးပျက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးပိတ်ရက်နေ့ အိမ်မှာအဲယားကွန်းဖွင့်လို့ မီတာခကုန်မှာကြောက်နေရင် ဒီအေးစိမ့်တဲ့အဲယားကွန်းကားမြို့တစ်ပတ်တစ်နေကုန်စီးပြီး ဖုန်းလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အမုန်းကြည့်မလား၊အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးသွားမယ့်သူတွေလဲ တက္ကစီသက်သာပီနော်၊ကံကောင်းရင် မြို့ပတ်ကားလေးစီးပြီး FA တွေတောင်ချစ်သူရမယ့်အခွင့်အရေးလာပီနော်
တံခါးပေါက် ၃ပေါက်ပါရှိသည့် SCANIA ကားများဖြင့် YBS ရန်ကုန်မြို့ပတ်ဘတ်စ်ကားလိုင်းပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်မှတ်တိုင်များ??ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်း ၁ မှတ်တိုင်များမှာ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးမှ စတင်ကာ ဓမ္မာရုံ၊ ၆ကွေ့၊ဧ ရာ(ဘုမ္မာ)၊ဥဇ္ဇနာ၊ဝဇီရာ၊ ဃဈေး၊မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်း၊ဘုန်းကြီးလမ်း၊(၅)လမ်း၊ ဂန္ဓမာဟိုးဆေး၊ညောင်ပင်(ပါ ရမီ)၊ပင်းယ၊မြင်သာဈေး၊ဥက္ကလာပဘုရား၊မိုးဆွေ၊စီမံကိန်း၊စံပြဈေး၊သစ်စက်၊
ခဈြသူစုံတှဲတှေ မွို့ပတျပွီးရိုခငျြလားဖဖေေ၊မမေတှေကေ ပိတျရကျမှာ သားသားမီးမီးတှကေို မွို့ပတျပွီး အဲယားကှနျးကားသဈကွီးစီးပွီးစမတျကကြ လိုကျပို့ခငျြလား၊FA တှကေလဲ အိမျမှာမီးပကျြတာဘဲဖွဈဖွဈ ရုံးပိတျရကျနေ့ အိမျမှာအဲယားကှနျးဖှငျ့လို့ မီတာခကုနျမှာကွောကျနရေငျ ဒီအေးစိမျ့တဲ့အဲယားကှနျးကားမွို့တဈပတျတဈနကေုနျစီးပွီး ဖုနျးလေးနဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှေ အမုနျးကွညျ့မလား၊အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးသှားမယျ့သူတှလေဲ တက်ကစီသကျသာပီနျော၊ကံကောငျးရငျ မွို့ပတျကားလေးစီးပွီး FA တှတေောငျခဈြသူရမယျ့အခှငျ့အရေးလာပီနျော
တံခါးပေါကျ ၃ပေါကျပါရှိသညျ့ SCANIA ကားမြားဖွငျ့ YBS ရနျကုနျမွို့ပတျဘတျဈကားလိုငျးပွေးဆှဲမညျ့ ယာဉျမှတျတိုငျမြား??ပွေးဆှဲမညျ့ ခရီးစဉျ လမျးကွောငျး ၁ မှတျတိုငျမြားမှာ အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေးမှ စတငျကာ ဓမ်မာရုံ၊ ၆ကှေ့၊ဧ ရာ(ဘုမ်မာ)၊ဥဇ်ဇနာ၊ဝဇီရာ၊ ဃဈေး၊မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျး၊ဘုနျးကွီးလမျး၊(၅)လမျး၊ ဂန်ဓမာဟိုးဆေး၊ညောငျပငျ(ပါ ရမီ)၊ပငျးယ၊မွငျသာဈေး၊ဥက်ကလာပဘုရား၊မိုးဆှေ၊စီမံကိနျး၊စံပွဈေး၊သဈစကျ၊
Source : အောင်ပါစေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ကီလိုမီတာပေါင်း ၄၀ ခန့် ရှည်လျားမည့် ရန်ကုန်မြို့ပတ် မိုးပျံအမြန်လမ်း စီမံကိန်း
၂၀၁၉ တွင် အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ရန်ကုန် မိုးပျံအမြန်လမ်းစီမံကိန်း
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အဝေးပြေး ဖြတ်လမ်းဆုံနေရာများ၌ ခုံးကျော်တံတား သုံးစင်းတည်ဆောက်မည်
ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဆိပ်ကမ်းများ၊Dry Ports အခြေပြုမြို့သစ်များနှင့်စီးပွားရေး စကြံလမ်းမကြီးပေါ်ထွက်လာရန် ရည်ရွယ်ထား
ထိုင်းဘတ်ငွေလဲနှုန်း စံချိန်တင်မြင့်တက်၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်၌ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်